M ka nwere ike ịdenye aha na Akwụkwọ akụkọ ma ọ bụrụ na ... | Martech Zone
Offọdụ n'ime unu maara nzụlite m ghọtara na m rụrụ ọrụ na Industrylọ Ọrụ Akwụkwọ Akụkọ ruo ihe karịrị afọ iri. Offọdụ n'ime ihe ndị m rụzuru bụ na ụlọ ọrụ ahụ, ma ndị ọkachamara ma na teknụzụ. Ọ na-ewute m n'ezie na akwụkwọ akụkọ na-ada… mana echeghị m na ọ bụ ọnwụ, ọ bụ igbu onwe n'ezie.
Akwụkwọ akụkọ na-ele anya dịka ọkwa ọkwa na-aga eBay na craigslist. N'ụzọ mpako, ha echeghị iwere ụfọdụ n'ime uru ha ma tinye ego na ntanetị ma ọ bụ nkewa ọkwa n'ịntanetị. Ihe dị ịtụnanya banyere nke a bụ na ha jidere kaadị kachasị - ọdịdị ala. A sị na akwụkwọ akụkọ chọtara ụzọ iji tinye ndị mgbasa ozi n'ịntanetị ka ọ bụrụ ihe ngwọta mpaghara, echere m na ha gaara aga. Ọ bụ akaha ugbu a… ọ bụla ịga nke ọma online nkewa usoro nwere mpaghara akụrụngwa ya.
Yabụ kedu ka m ga-esi denye aha na Akwụkwọ akụkọ?
Ọ bụrụ na ndị na-ebipụta akwụkwọ ha ga-akwụsị ịdọpụta ọtụtụ ihe AP, ndị Editọ ha kwụsịrị idezi, ha kwụsịrị ịhapụ ikike mpaghara, ha bidoro ịhapụ ndị nta akụkọ ha ka ha gbaa ọsọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ - ọ bụrụ na ha kwụsịrị ịdị nzuzu banyere ịmanye 'akara ala' ma jiri ikike ha nwere, aga m anọ ha.
Akaebe? Naanị gụọ Blog nke Ruth Holloday mgbe ị nwetara ohere. Arụrụ m ọrụ n’akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta n’obodo anyị ruo afọ ole na ole, na-agụ akwụkwọ akụkọ ahụ kwa ụbọchị, amachaghịkwa Rut. Mana maka afọ gara aga m na-agụ blog ya ọ na-efepụ m. Iguzosi ike n'ezi ihe ya, ịkwụwa aka ọtọ, nkwupụta okwu, na oke agụụ iji nweta akụkọ ahụ bụ ihe m na-amataghị mgbe ọ dere maka Star. N'ezie, Amaghịdị m onye ọ bụ na Star!
Kedu ka ha siri gbochie talent dị ka ya ka ọ ghara ịgbawa Amaghị m… Nanị m ga-eche na ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na idezi. M na-agụ isiokwu na IndyStar ugbu a na ọtụtụ n'ime ha na-agụ dị ka uwe ojii akụkọ ma ọ bụ obituaries… ọ dịghị ndụ n'ime ha bụla. Ọ na-agba m ara na ha enweghị ike ịhụ nke a ma mee ihe banyere ya.
Enwere m onye isi na onye ndụmọdụ, Skip Warren, ogologo oge gara aga. O kwuru na ndị ọrụ ga-eju gị anya oge niile ma ọ bụrụ na ị nye ha ohere iji nwee ọganiihu. Nke a abụghị ihe dị iche na akwụkwọ akụkọ. Corpolọ ọrụ ndị mọnk, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na njikwa nke etiti ebibiwo akwụkwọ akụkọ ahụ. Blog blog ga-aga n’ihu na-ewu ọkụ… ma onye ọ bụla nwere onye na-agụ akụkọ ga-ahụ ndị odeakụkọ akwụkwọ akụkọ a ma bido ịgụ blọọgụ ha!
Ruth enweghị usoro mgbasa ozi iji gbalịa idebe ya dị ka kpakpando nwere, mana enweghị nchekasị - echere m na saịtị Star ahụ ga-egbu oke nke aka ya nke ga-eme ka ndị mmadụ gaa na saịtị ndị ga-enye nkọwa dịka nke Rut! Anụla m n'ime ndị nọ n'ime na mpaghara uto na saịtị Star agbadoro anya n'ezie na ọdịnaya ndị ọrụ jiri, niche (mpaghara), na ịde blọgụ. Huh! Cheedị banyere nke ahụ!
Tags: kpakpando Indianapolisindy kpakpandoakwụkwọ akụkọ
Jun 15, 2007 na 10:56 AM
Know maara Doug, M ga-echezọ na ndị mmadụ ka na-agụ akwụkwọ akụkọ. Amaara m na nke ahụ dị egwu, mana ọ dịla anya kemgbe m nwere, na usoro ntụgharị m agbanweela.
Mgbe ndị ahụ na-ere ahịa na-abịa site na ọnụ ụzọ na-ere ndenye aha, amaara m na m na-ejedebe na-ele anya dị ka ha jụrụ m ma m ga-azụta otu mgbochi ice maka igbe igbe m ma ọ bụ ụfọdụ mmanụ mmanụ maka ụgbọ ịnyịnya m.
Anya nke na-ekwu “… n'Ezie… ndị mmadụ ka na-eme ya?” 🙂
Tony m maara ihe ị na-ekwu, Tony. Google Feedreader agbanweela ndebanye aha m na akwụkwọ akụkọ. M ka na-agụ ụfọdụ magazin… ikekwe ebe talent akwagala. Ma abụ m akwụkwọ nut. Echere m na isi na mpempe akwụkwọ ka dị m.
Ihe kachasị m mma bụ talent, ọ bụ ezie though nke ahụ bụ ihe m na-achọ ikwu. Enwere m olileanya na ndị nta akụkọ na-abanye na ịde blọgụ karịa (na mpụga akwụkwọ akụkọ ha na-arụ ọrụ). N'ezie, ọ ga-amasị m ịhụ ebe ịde blọgụ 'kwadoro' ya na ezigbo ndị nta akụkọ na-enweghị oke maka ebe ha ga-ede ederede ha.